अन्टसन्ट का’रण देखाई कुलमा’नलाई पाखा लगाईयो भने यो सरा’सर रास्ट्रघात हुनेछ , यो सरा’सर ग़’द्दारी हुनेछ । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाण्डौं । सा’माजिक अभि’यानता ज्वा’ला संग्रौलाले कुलमानको पक्षमा बो’ल्दै तपाईंले गलत निर्णय गर्नु भयो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तत्काल छो’ड्नुस भनेर केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दि’एकी छिन् । उनी भन्छिन: जनताले चाहेको हर मान्छेलाई हटाउने प्र’यास गर्नु सरकारले पतनको पद रोज्नु हो।
“उज्यालो नेपालका अभि’यन्ता कुलमान घिसिङलाई अन्तत: भ्रस्ट’हरुले पाखा लगाउने नै ष’ड्यन्त्र रचि”सकेछन् ! अब ससक्त सडक आन्दो’लनको तयारी गर्नु पर्छ ! अनि कुलमानलाई ह’टाउन लबि’ङ गर्ने रास्ट्र’घाती ग’द्दारहरुको सारा सम्पति जफत गरेर भोका जनतालाई बाँड्नु पर्छ। enough is enough ”,फेसबुकमा उनी लेख्छिन्। खबरमान्डु बाट।
Previous कुलमानलाई पुनःप्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ल्याउन माग गर्दै डडेल्धुरामा राँके जु’लुस,,, हेर्नुहोस्।
Next ७७ वटा जि’ल्लाको मन जितेको ब्यक्ति’लाई हटाउने अ’प्रीय निर्णय गरिएमा जनता ले जिन्दगी भर चि’त्त दुखाउने छन।